Ngo-August, ihhotela lesikhathi (ikhishi elikhulu, ikati, i-Sony ps4, i-Nintendo switch, ukubukwa komfula) liyatholakala ukuze liqashwe isikhathi esifushane nesikhathi eside. - I-Airbnb
Ngo-August, ihhotela lesikhathi (ikhishi elikhulu, ikati, i-Sony ps4, i-Nintendo switch, ukubukwa komfula) liyatholakala ukuze liqashwe isikhathi esifushane nesikhathi eside.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-小栗旬
U-小栗旬 Ungumbungazi ovelele
Wamukelekile abangani abathanda izilwane ezincane nabathanda ukuhlala! Ngenxa yokuthi uMaomao uhamba naye usuku lonke, ngithemba ukuthi ngingamthanda futhi ngimphathe kakhulu! Indlu engivame ukuhlala kuyo ihlanzekile futhi icocekile.Kuneshodi le-British endlini, ngakho-ke lizohlanzwa nsuku zonke.Ngenxa yomsebenzi womuntu siqu nohambo lwebhizinisi, le ndawo yokuhlala isivele iyindawo ekhethekile. Uma udinga ukubingelela kusengaphambili, ngiyakuthuma ikati kuya Homestay. Sicela ukumnakekela njengoba ekhaya lakho siqu. Ikhishi lingasetshenziswa mahhala, ngakho khumbula ukulihlanza ngemva kokulisebenzisa. Kunamakamelo amabili amasha anemibhede ephindwe kabili engu-2.0×1.8 kanye nemibhede eyi-double ejwayelekile engu-2.0×1.5. Khetha eyodwa kulawa amabili. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwekhishi kanye nomngane wekati kufanele kuhlangabeze ukuhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbili.
Ikheli ungaphakathi Vanke Park, omunye lokulala, igumbi elilodwa ephilayo, omunye yokugezela balcony ezimbili. Le ndawo ebusweni imayelana 80 square metres. Ikamelo ophilayo, yokugezela ahlukene, yangasese ikhishi ingasetshenziswa ngaphandle ekamelweni lezivakashi. Kwathatha 4000 ) Kukhona i-TV kasofa egumbini lokuphumula, iQiyi neTencent Video bonke banamalungu amahhala. Kukhona futhi i-ps4, shintsha
Kude ngamakhilomitha angu-2 ukusuka e-Qingshan Lake Wanda, 2km ukusuka e-Tianhong Daguan, kanye no-2km ukusuka esiteshini esingaphansi komhlaba. Asikho isitobhi sebhasi eduze, ngakho-ke ungakhetha kuphela itekisi noma ibhayisikili.
Inqobo nje uma ungadingi lutho phakathi namahora ami okusebenza, ungakhuluma nami
U小栗旬 Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$15.